Olee otú mbubata AVI ka iMovie?
o 5.7 iMovie n'Otu
Part 1: Gịnị mere niile AVI faịlụ na-arụ ọrụ nke ọma na iMovie?
Part 2: Olee mbubata AVI ka iMovie on Mac?
Nkebi nke 3: Gịnị mere ihe AVI video faịlụ-apụghị dị ka iMovie?
A ọtụtụ ndị n'anya na-ekiri ha mmasị fim, TV usoro ma ọ bụ mkpachị mgbe ha na-aga. N'ihi na ihe iOS ngwaọrụ onye ọrụ, nke a mmetụta nke ọṅụ ike-ntakịrị ike iji nweta esighịkwa ndakọrịta mbipụta na iOS ngwaọrụ nwere na ọtụtụ AVI faịlụ formats.
Ọ mara maka a eziokwu na iOS ngwaọrụ nanị na-akwado AVI faịlụ formats dị ka MP4, M4V na MOV. Ya mere, ihe otú otu onye na mkpa na-eme iji nweta ndị mmasịrị-arụ ọrụ na ha iPhone ma ọ bụ iPad?
Converting ha na obere vidiyo na-adabara formats bụ otu n'ime viable na irè ngwọta niile ugboro. Isiokwu a ezubere wụsịrị ụfọdụ ìhè na ụzọ nke importing AVI faịlụ na-eme ka ha na-arụ ọrụ nke ọma na iOS dabere na ngwa dị ka iMovie.
Ebe a, anyị ga-ekwu banyere otu n'ime ndị kacha ụzọ mbubata AVI ka iMovie on Mac, site a software maara dị ka Wondershare. Ebe a bụ ihe niile ị na chọrọ ịmata banyere ya.
Video Ntụgharị kacha site Wondershare bụ otu nke elu ngwa ugbu ke ahịa na-enye kacha ntughari nke videos dị iche iche na faịlụ formats dị ka ndị kasị nkịtị niile, MP4, WMV, DivX, wdg
Wondershare Video Converter Ultimate Bụghị nanị awade ngwa video tọghatara, ma tinyere na e nwere a usu atụmatụ na dị oké ọnụ ahịa banyere, dị ka:
30x ngwa ngwa video akakabarede
Tọghata nta ka ọ bụla usoro.
4K UHD nkwado
Enweghị ntụpọ DVD Ahụmahụ
Nbudata nke YouTube videos
Ikuku na-ebufe nke videos
Na wuru nchịkọta akụkọ dezie, welie na hazie gị mgbasa ozi.
2D video ka 3D akakabarede
GPU osooso transcoding
Ebe a bụ ndu n'ihi na converting AVI ka adabara iOS dakọtara format iji Wondershare Video Converter Ultimate.
Nzọụkwụ 2: Mgbe ngwa na ihe ịga nke ọma butere, họrọ 'Tinye faịlụ' nhọrọ ugbu a na n'etiti ngwa window na-agagharị n'ihi gị chọrọ fim ma ọ bụ video clip na họrọ ya. Ngwa ga-ugbu a na-agụ faịlụ na-egosipụta ya na ya video tree.
Nzọụkwụ 3: Na mmepụta format ugbu na nri n'igbe nke window, họrọ chọrọ mmepụta format na ị chọrọ gị video faịlụ ka converted kwa. E nwere otu n'usoro nke format nhọrọ dị ịhọrọ site na, nke na-agụnye faịlụ formats sitere na site MP4, MP3 (audio), AVI, WMV, DivX, MOV, iPad na na.
Nzọụkwụ 4: Họrọ 'MOV' ma ọ bụ 'iPad' dabere n'elu iOS ngwaọrụ ị na-na jide. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPhone, ị ga-aga n'ihi na MOV faịlụ Ọkpụkpọ na ọ bụrụ na-eji ihe iPad, mgbe ahụ, na-aga n'ihi iPad faịlụ Ọkpụkpọ.
Na nke a demonstrative ikpe, anyị ga-ahọpụta ndị iPad faịlụ Ọkpụkpọ.
Nzọụkwụ 5: Ozugbo i na-ahọrọ kwesịrị ekwesị faịlụ Ọkpụkpọ, see tọghata na ala nri akuku na ndidi na-echere maka video ga-converted.
Cheta na: Ọ bụrụ na ọrụ na-eji na-ekpe ikpe version nke Wondershare Video Converter Ultimate, naanị 1 / 3rd nke ogologo nke video ga-converted. Full ogologo conversions bụ nanị dị na ugwo version.
Nzọụkwụ 6: Ị ga--amara gị ọkwa obere oge ka ​​anya dị ka gị video faịlụ Nwela converted.
Nzọụkwụ 7: Ị nwere ike ma na-ejighi eriri nyefee converted faịlụ ngwaọrụ gị ma ọ bụ jiri ndabere eriri USB dị na ngwaọrụ gị.
Usoro zuru ezu. Enwe gị video clip na gị handset.
iMovie naanị akwado ole na ole nke faịlụ codecs dị ka MP4 na MOV. Ọtụtụ, AVI-ewere dị ka a solo faịlụ Ọkpụkpọ ma n'ezie na ọ bụ nanị otu faịlụ akpa na ihe n'ezie dị mkpa bụ ihe ụdị video na / ma ọ bụ ọdịyo codec e ji ike ya.
N'ozuzu, ihe AVI faịlụ ga na egwuregwu n'ụzọ kwesịrị ekwesị na iMovie mgbe ma ndị video na ọdịyo format nke faịlụ na-akwado ma na-agụ site iMovie onwe ya. Ọ bụrụ na ndị video usoro nke AVI faịlụ bụ dakọtara na iMovie na audio bụghị, mgbe ahụ AVI faịlụ bụ n'ihi na-adịghị eme nke ọma na-agụ site na ngwa na ọbụna na-egwu ya ọbụna ma ọ bụrụ na faịlụ a na-agụ.
N'ihi ya ọ dị mkpa ka onye iji tọghata ha video faịlụ ka iMovie dakọtara faịlụ formats.
Olee otú mbubata FLV ka iMovie
> Resource> iMovie> Olee mbubata AVI ka iMovie?